February 2019 | Myanmar Retailers Association
News In 2021
Communication & Public Affair Committee
Communication & Member affairs Committee
Retail Industry Development Committee
Membership fees and annual fees
Who Should Be Members?
မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီရောင်းချသူများအသင်း (MMRA)နှင့် Strategy First Institute တို့ ပူးပေါင်းကာ Effective Management Skills For Retail Services (Advanced Level) သင်တန်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်။
ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာသော လက်လီကဏ္ဍအတွက် လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီရောင်းချသူများအသင်း (Myanmar Retailers Association, MMRA)နှင့် Strategy First Institute တို့ ပူးပေါင်းကာ လက်လီကဏ္ဍအတွက် လိုအပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများ၊ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်။ လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လက်လီလုပ်ငန်းများမှ မန်နေဂျာများ၊ Supervisor များ၊ လက်လီ လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းသို့ Professional ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လို သူများအတွက် လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချနိုင်ရန် စာတွေ့ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၂)လခွဲ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Effective Management Skills for Retail Services သင်တန်း တွင် လက်လီလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်တဲ့ အသိပညာ များကို သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ Retail လုပ်ငန်းများတွင် အရေးပါသည့် Cross Selling နှင့် Up-Selling, Retail Operation Management, ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ထိန်းသိမ်းစီမံခြင်း Retail လုပ်ငန်းများတွင် ကျင့်သုံးရမည့် HR ပိုင်း၊ Customer များကို အဓိက ထား ရောင်းချခြင်းနည်းလမ်းများ အပါအ၀င် Retail sector တွင် လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အကျိုးရှိမည့် ခေါင်းစဉ်များကို သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကို ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိန်မင်း၊ ဆရာမဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် ၊ ဆရာမဒေါ်အေးအေးဝင်း ၊ ဆရာဦးမျိုးထက်နိုင်၊ ဆရာဦးအောင်သူတို့နှင့် အတူ လက်လီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲမှ အတွေ့အကြုံရှိ လုပ်ကိုင်နေသူများမှ ပါဝင်အားဖြည့် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လက်လီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ အသင်းဝင် လုပ်ငန်း များမှ တက်ရောက်လိုသူများအတွက် သင်တန်းကြေးမှ (၃၀၀၀၀) ကျပ် လျော့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးသောအခါတွင်လည်း Strategy First Institute နှင့် Myanmar Retailers Association (MMRA) တို့ ပူးပေါင်း ချီးမြှင့်သော Certificate ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Effective Management Skills for Retail (Advanced Level) တွင် သင်ကြားမည့်ဆရာ၊ ဆရာမများ
From Strategy First Institute
Lecturer (1) – Dr. U Sein Min, Ph.D (Passau University, Germany), M. Com, B. Com (YIE)
Lecturer (2) – Dr. Daw Ohnmar Myint, Ph.D (HRM, Delhi), M. Com, B. Com (Hons, YIE)
Lecturer (3) – Daw Htay Htay Myint, M. Com, B. Com (Hons, YIE)
Lecturer (4) – Daw Aye Aye Win, M.A (International Business Studies) (Sophia University, Japan) M. Com, B. Com (Hons, YIE) Dip in English
Lecturer (5) – Daw Soe Soe, Master of International Business Administration ( University of Northumbria,UK),BBA( ABAC)
Lecturer (6) – U Myo Htet Naing, M. Com, B. Com (Hons, YIE)
From Myanmar Retailers Association (MMRA)
Lecturer (1) – U Thurein Nyein, (Managing Director, Nielsen MMRD)
Lecturer (2) – Daw Tin Su Hlaing, (Managing Director, Monument Book & Toys Myanmar)
Lecturer (3) – Daw Zin Zin Nyo Myint, (CEO, ABC Convenience Store)
Lecturer (4) – U Zaw Min Latt, (Executive Director, Myanmar Convenience store Co., Ltd)
Effective Management Skills for Retail Services (Advanced Level) သင်တန်းချိန်၊ သင်တန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ် နှင့် သင်ကြားမည့်နေရာ။
Starting Date – 19th February 2019
Duration – 2.5 Months (February 2019 to April 2019)
Every Tuesday – 6:00 pm to 8:30 pm
Every Saturday – 6:00 pm to 8:30 pm
Every Sunday – 9:00 am to 11:30 am
Program Fees – 400,000 Kyats
သင်ကြားမည့်နေရာ – Strategy First Pyay Road Campus - အမှတ် (၂၃၉)၊ ပြည်လမ်း (မြေနီကုန်း City Mart အနီး)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Effective Management Skills for Retail Services (Advanced Level) သင်တန်းတွင် သင်ကြားပေးမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ-
- Category Management in Retail
- Management and Leadership
- Professional Sales Management & Customer Service
- Inventory Management in Retail
- Human Resources management for Retail Operations
- Research and Information System for Retail
- Managing Retail Operation
- Financial Management for Retail Manager
- Supply Chain in Retail
- Retail Marketing
- Technology in Retail
ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများကို Online မှတစ်ဆင့် စာရင်းပေးသွင်း အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
(သင်တန်းကြေးမျာကို AEON လစဉ်အရစ်ကျငွေပေးချေမှု စနစ်ဖြင့်လည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။)
အိမ်ပြန်နောက်ကျသော သင်တန်းသားများအတွက် အိမ်ပြန် Ferry များလည်း စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
Telenor Star ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Strategy First မှာသင်တန်းအပ်ပြီး Discount ရယူနိုင်ပါသည်။
Telenor Star for on Campus =30000ks Discount
Telenor Star for Online Register =50000ks Discount
Yangon Campus 1 - Strategy First Panchan Tower Campus - အမှတ် (၈)၊ မြေညီထပ်၊၊ ပန်းခြံတာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း နှင့် ဗားဂရာ လမ်းထောင်၊့ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon Campus2- Strategy First Pyay Road Campus - အမှတ် (၂၃၉)၊ ပြည်လမ်း (မြေနီကုန်း City Mart အနီး)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Yangon Campus3- Strategy First U Wizara Campus -အမှတ် (၂၃၇)၊ ဦးဝိစာရလမ်း နှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်အနီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Yangon Campus4- Strategy First Hledan Campus - အမှတ်(၅၇၅)၊ လှည်းတန်းဂုံးတံတားအဆင်း၊ ပြည်လမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။ (မာလာ ကားမှတ်တိုင်အနီး)။
မှတ်ချက် - ဆေးလိပ်၊ ဘီယာ၊ အရက်ကုမ္ပဏီများ၊ အချို့ MLM ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများကို ၀န်ဆောင်မှုမပေးပါ။
5 -2- 2019
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပထမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ဟောပြောပွဲ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်း၏ ပထမအကြိမ် နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲ
Copyright@2016, MMRA. Powered By Myanmar Technovation Solution Co.,Ltd.